तपाईं सेक्सी हुनुहुन्न, अब के? | Martech Zone
हामीले एक पटक कसैले भनेको थियो कि हामी, वा हाम्रो फारम निर्माण आवेदन, "सेक्सी" थिएन। केहि पक्षहरुमा मेरो लागी त्यो व्यक्ति सहि थियो। फारमहरू, आफैंले सेक्सी हुँदैनन्, तर ती व्यक्तिहरू जसले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्छन् र डेटा स gather्कलन गर्न तिनीहरूमा निर्भर छन्, तिनीहरू सेक्सी छैनन् भने, राम्रै महत्वपूर्ण छन्।
त्यसोभए तपाईं कसरी, एक व्यवसाय मालिक, विपणक, आदि, कि एक उत्पादन वा सेवा छ कि "सेक्सी" छैन यसलाई "सेक्सी"? यहाँ केहि तरिकाहरू छन्।
तपाईंको ग्राहकको कथा बताउनुहोस्: संभावना छ कि तपाईंसँग केहि चाखलाग्दो कम्पनीहरू छन् तपाईंको सेवा वा उत्पादन प्रयोग गरेर। केस स्टडी सिर्जना गर्नुहोस्। ग्राहकहरूलाई तपाईंको ब्लगमा पाहुना पोष्ट गर्न दिनुहोस्, उनीहरूसँग भिडियो अन्तर्वार्ता गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई तपाईंको सामाजिक नेटवर्कमा पोस्ट गर्नुहोस्। तपाईंको स्पेसमा ब्लगरहरूमा उनीहरूको कहानी, उनीहरूको सफलताहरूको साथ पुग्नुहोस्। तपाईंको उत्पादनको सुन्दर र नवीन प्रयोगहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेर तपाईं यसलाई असीमित रूपमा अझ रमाइलो बनाउँनुहुन्छ र तपाईंको बारेमा कुरा गर्न वा लेख्न मानिसहरूका लागि नयाँ नयाँ अवसरहरू खोल्नुहोस्।
हुड खोल्नुहोस्: तपाईंको व्यवसायलाई सच्चाइमा रोचक प्रविधि छ? के तपाईले आफ्नो व्यवसाय चलाउन सहयोग गर्नको लागि एक अद्वितीय प्रणाली सिर्जना गर्नुभयो? सम्भावना यो छ कि तपाईंको व्यवसायमा केहि अद्वितीय छ जसले यसलाई ड्राइभ गर्दछ (वा तपाईं सफल हुनुहुनेछैन)। तपाईंको व्यवसायको अद्वितीय पक्षहरू हाइलाइट गर्नुहोस् र मानिसहरूलाई पर्दा पछाडि झलक दिनुहोस्। सम्भवतः यो त्यस्तो चीज हो जुन सम्भावित ग्राहकहरू वा प्रेसका सदस्यहरू रोचक हुनेछन्।
तपाइँको ग्राहकहरुलाई तपाइँको बिडिंग गर्न दिनुहोस्: यो पहिलो भन्दा अलि फरक छ। सामाजिक नेटवर्कको सौन्दर्य यो हो कि यसले तपाईंको ग्राहकहरूलाई तपाईंको बारेमा कुरा गर्न अनुमति दिन्छ। माफार्मस्ट्याक हामी हाम्रो को बारे मा व्यक्तिहरु के भन्छौं निगरानी गर्दछौं twitter। बरु ती सबै राम्रा चीजहरू आफैंमा राख्नुको सट्टा हामीले एउटा सिर्जना गर्यौं टम फेम हामीले ती सकारात्मक ट्वीटहरू छाप्यौं र फ्रेम गर्‍यौं र तिनीहरूलाई हाम्रो अफिसको हलवेमा राख्यौं। हामीले तिनीहरूलाई फिर्ता गर्नुभयो र भित्तेबाट केही ट्वीटहरू हाम्रो फेसबुक पृष्ठ र हाम्रो ब्लगमा पोस्ट गर्नुभयो। यसले मानिसहरूलाई हाम्रो बारेमा फेरि कुरा गर्यो र केहि व्यक्तिहरूलाइ मोहित गर्‍यो जसले हाम्रो ट्वीटहरू पुन: पोष्ट गर्न मूल टिप्पणीहरू लेखेका थिए। यसले तपाइँको ब्रान्ड र तपाइँको उत्पादन को बारे मा उत्साह पैदा गर्दछ किनकि यो तपाइँको सेवा को वास्तविक प्रयोगकर्ताहरु बाट आउँदैछ। यो तपाइँको ग्राहकहरु तपाइँ को लागी कुरा गर्छ, तिनिहरु लाई "सेक्सी" को लागी र तपाइँलाई किन मन पराउनुहुन्छ भनेर।
केवल किनकि तपाईसँग सब भन्दा चम्किलो ग्याजेट छैन वा इन्टरनेटमा सब भन्दा लोकप्रिय सामाजिक नेटवर्कि application अनुप्रयोगको मतलब तपाईको व्यवसाय उत्साहजनक छैन। सतह भन्दा अलि गहिरो खन्नुहोस् र हेर्नुहोस् व्यक्तिले के कुरा गर्छन्। संभावना छ कि तपाईं धेरै गहिरो खन्नु पर्दैन।
टैग: ग्राहक कहानीformstackकथा भन्दै
ल्यापटप छालाको साथ कन्फरेन्समा तपाईंको ब्रान्ड प्रचार गर्नुहोस्
तपाइँ तपाइँको प्रयोगकर्ता हुनुहुन्न
नोभेम्बर २०, २००। 20::2009 अपराह्न
मलाई लाग्छ कि 'सेक्सी हैन' केही हदसम्म इण्डियानामा सम्मानको ब्याज हो। यहाँ धेरै कम्पनीहरूले अनुप्रयोग बनाउँदछन् जुन धेरै सेक्सी पनि होइन ... तर तिनीहरू काम गर्छन्। तिनीहरू सुरक्षित छन्, तिनीहरू मापन गर्छन्, ग्राहकहरूले के गर्न चाहन्छन् भन्ने गर्छन्। सेक्सी उत्तम छ जब तपाईं मिति खोज्दै हुनुहुन्छ, तर यो व्यवसाय हो!
तपाईं कसैको उत्तेजनाको पनि लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ जो वास्तवमा तपाईले के गर्नुभयो त्यसका "कामुकता" लाई देख्नुहुन्छ। त्यो ग्राहक, कर्मचारी, उद्योग साझेदार, वा अरू कोही हुन सक्छ।
मसँग क्याल्कुलस शिक्षक थिए जो गणितले कसरी काम गर्छन् भन्ने बारे उल्लेखनीय रूपमा वर्णन गरिएको थियो। उसले चकबोर्डमा समीकरणहरू र रेखाचित्रहरू राख्थ्यो र व्यावहारिक रूपमा खुशीको साथ बबल थियो कि यो सबै कति सुन्दर थियो। क्रिसमस बिहान उनको बच्चाको मुस्कान थियो। यदि तपाईं उहाँसँग कोठामा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईंले सहयोग गर्न सक्नुहुन्न तर संख्याहरू बीचको सम्बन्धहरूमा सुन्दरता देख्नुहुनेछ। उसको उत्साह संक्रामक थियो। उसले क्यालकुलस सेक्सी बनायो।
माटो राम्रो बिन्दु र म सहमत छु। उत्तेजना, जोश, कसैले उत्पाद वा कम्पनीको लागि निश्चित रूप बाट लाभान्वित हुन सक्छ। यद्यपि म पक्का छैन कि म क्याल्कुलस मा कामुकता देख्न सक्छु!